Freshsales: Kukwezva, Kubata, Kuvhara, uye Kurera Zvinotungamira Kune Rako Bhizinesi Mune Imwe Yekutengesa Platform | Martech Zone
Iyo yakawanda CRM uye yekutengesa inogonesa mapuratifomu muindasitiri inoda kubatanidzwa, kuwiriranisa, uye manejimendi. Iko kune yakanyanya kutadza chiyero mukutora kwemidziyo iyi nekuti inokanganisa sangano rako, yakawanda yenguva inoda varidzi uye vagadziri kuti zvinhu zvese zvishande. Pasina kutaura iyo yekuwedzera nguva inodikanwa mukupinda kwedata uye ipapo zvishoma kana kushaya njere kana nzwisiso murwendo rwezvaunotarisira uye vatengi.
Freshsales ndeye CRM yekutengesa yezvikwata izvo zvisingade kukwikwidza pakati pezvakawanda maturusi. Freshsales inopa 360-degree yekutengesa mhinduro mune imwe chikuva, kuti ugone:
Kukwezva iyo chaiyo inotungamira kune rako bhizinesi
Batanidzwa kuburikidza nema touchpoints akawanda
pedyo inobata nekukurumidza
Kurera hukama hwakakosha.
Zvimiro zveFreshsales Sanganisira
Contacts - iyo 360-degree maonero emutengi wako ane zvemagariro profiles uye yega yega yekubata mune imwechete skrini ine auto profile yekuvandudza.
Akangwara Kutungamira Kugovera - manikidza gadzirisa yako yekukora zvibodzwa uye sanganisira Freshsales 'yekunyepedzera njere kurongedza zvinotungamira zvichienderana nebasa ravo uye chimiro.
Territory Management - gadzira matunhu akafanana nesangano rako rekutengesa chimiro. Rwoga ipe chaipo vatengesi vekutengesa kune chaicho vatengi.
Kugadzwa, Mabasa, Mafaira, & Zvinyorwa - ronga kugadzwa, nyora manotsi nekukurumidza, govana mafaera, uye shandira pamwe ne timu pamabasa.
Kutengesa Pipeni Kuona - tarisa kufambira mberi pane akavhurika madhiri mune imwechete kuona neinoona yekutengesa pombi iwe yaunogona kusefa uye kurongedza. Gadzira akawanda mapaipi (inbound, outbound, e-commerce, nezvimwewo). Iyo interface inoita kuti iwe ubatanidze netarisiro zvakananga kubva padheshibhodhi.
Webhusaiti & App Kutevera - teedzera tarisiro yako uye uzive mashandiro ainoita newebsite yako kana zvigadzirwa zvemadhijitari. Ronga smart, hurukuro dzinoenderana, uye shandisa iyo kugadzirisa lead mapoinzi kune cherry-sarudza iyo inopisa inotungamira.
Chiitiko Nguva - tora muratidziro wenguva yechiitiko chega chega chekutarisira, saka timu yako yekutengesa inogona kutora nguva chaiyo uye kuvhara madhiri nekukurumidza.
Smartforms Kutungamira - tora yako yewebhu inotungamira yakanangana neCRM yako. Tora zvirinani mamiriro ekutungamira se Freshsales auto-populates webhusaiti kushanya, enhau midhiya profiles, uye zvimwe.
Dzvanya kufona - hapana yekuwedzera software / Hardware mutengo. Ingoisa mafoni nekukanya kamwe chete kubva mukati Freshsales uchishandisa yakavakirwa-mukati foni - neese anopinda uye anobuda mafoni anongopinda otomatiki. Sarudza izwi rako rese uye gamuchira mameseji.
Android uye iOS Mobile App - tora 360 ° maonero emutengi wako paunenge uchienda neFreshsales Android uye iOS maapp.
Outbound Call Chiitiko Kuzivisa - tsvaga kuti mangani mafoni anobuda akaitwa nekutengesa kwega kwega kune imwe nguva nguva.
Tumira uye uteedzere maemail - tumira kana kugamuchira maemail kubva chero Freshsales kana email yako mutengi, uye tsvaga iyo email mune Yakatumirwa kana Inbox folda yeese maapp. Tumira akawanda maemail uchishandisa akasarudzika matemplate uye uteedzere mashandiro avo nemushandirapamwe wekutevera. Tora chaiyo-nguva Notices pane email kuvhura uye kudzvanya, uye ronga yako inotevera kosi yekuita. Kuteedzera DKIM kwemaimeri akasaina maemail ekuvandudza kunyoreswa.
Workflows neMakambani Ekutengesa - Shandura zvinhu zvinodzokororwa, kugadzirisa matanho, uye kuve unogadzira nehungwaru workflows. Gadzira uye uteedzere mutemo-based email macampaign ekutumira akasarudzika maemail kune ako tarisiro. Trigger otomatiki zviito zvinoenderana nehunhu hwavo.
Sales Reports uye Kufanotaura - shandisa akajairwa mishumo kana gadzira yakasarudzika mishumo kuburitsa chero dhata kubva kuCRM. Iwe unogona zvakare kuronga uye kutumira kunze mishumo uye ugovagovana nekukurumidza mukati memapoka ako. With kutengesa kutenderera uye velocity inoshuma, unogona kutsvaga kuti timu yako iri kutora nguva yakareba sei kuvhara mikana. Ziva matanho ayo reps yako yavanoshandisa yakawanda yenguva yavo mukutengesa kutenderera.
Dashboard - tarisa akawanda mashumo mune imwechete skrini ine mhenyu inogadziriswa mishumo yedashboard. Tevedza chinzvimbo chekutengesa kwako chero nguva kuburikidza nesarudzo uye sarudzo dzekunze.
Kufambisa uye Kubatana - Leaner uye nekukurumidza-kamwe-tinya data kupinza kubva kuSalesforce, Zoho CRM, Insightly, Pipedrive, Salesforce IQ, kana CSV chete. Sangana ne Freshchat, Freshdesk, G Suite, Chikamu, Outlook, Zapier, Shanduko, Hubspot, Mailchimp, Hofisi, iine zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinouya!
Multilanguage - Mitauro gumi ikozvino yaitwa kutsigira pasi rese mutengi base.
Zvinogamuchirika - Yakavakirwa muUnited States muIO 27001, SSAE16, uye HIPAA inoenderana data nzvimbo. Freshworks zvakavanzika maitiro ndeye TRUSTe yakasimbiswa uye GDPR inoenderana.
Saina Kuti Uwane Mahara Freshsales Akaunti
Kuzivisa: Ndiri Freshsales zvakabatana.
Tags: 360 dhigiriiaichakagadzirwa njereemail yakawandaCRMcrm kutamaEmail MarketingFreshsalesHIPAAlead alamamitauro yakawandakutengesa mushandirapamwe manejimendikutengesa kutendereraKugonesa Kugonesakufungidzira kwekutengesapombi yekutengesakutengesa kushumavelocity yekutengesayekutengesa yekufambisa yekufambisaSSAE16